China BA simbi isina machira Kugadzira uye Fekitori | Huaxiao
Sino Stainless Simbi Kukwanisa nezve BA isina simbi machira, Bright Annealing isina simbi machira
Hupamhi: 100mm - 1500mm, izvo zvakadzvinyirirwa zvigadzirwa pls tarisa muzvipenga zvigadzirwa
Nhovo uremu: 10MT
Isimbi isina kuchena Yakajeka uye annealing (BA)
Uye iyo yemhangura alloy inosanganiswa nyore nyore panguva yekurapa kwekupisa. Kuitira kudzivirira oxidation uye nekuvandudza iwo wepamusoro mhando yeiyo workpiece, inofanirwa kuverengerwa munzvimbo yekudzivirira kana yekuzorora, inonzi annealing annealing. Iwo ekudzivirira emuchadenga anowanzo shandiswa mukupisa kwekupisa kwemhangura nemhangura maalloys imvura mhute, ammonia kuora, kusakwana kwemoto uye kupera simba kweammonia, nitrogen, yakaoma hydrogen uye gasi rakapiswa zvishoma (kana mamwe magasi anotsva). Inogona kusarudzwa zvinoenderana nerudzi, kuumbwa uye zvinodiwa zvealloy.
Mhangura yakachena uye chena mhangura haina oxidized munzvimbo isina simba inoderedza, uye inonyatso chengetedzwa nemumoto we ammonia une 2% H2 kana gasi rine 2% kusvika 5% H2 uye CO isina mwoto. Mhangura yakachena inogona zvakare kuchengetedzwa nehutsi. Kuitira kudzivirira hydrogenosis, kana okisijeni iine okisijeni yakawedzerwa, iyo hydrogen yezvinhu mumhepo yekudzivirira haifanire kudarika 3%, kana kurapwa kwekupisa mune micro-oxidizing mhepo sekutsanangurwa pamusoro. Mhangura yakachena inoshandiswawo zvakanyanya mukuvhara chinhu. Ndarira ine aluminium, chromium, niobium uye silicon inogona kuwana annealing inopenya chete munzvimbo inoderera kwazvo. Mushonga wekupisa (annealing kana kudzima) webheririum bronze unowanzo kuora neamoniya kuora, asi chikamu chisina kugadziriswa cheammonia hachifanirwe kudarika makumi maviri kubva muzana, zvikasadaro matambudziko ebhuru anogona kuitika.
Brass ine yakaderera zinc yezvinhu inogona kuvhenekerwa, asi kupenya kwakajeka kwendarira ine zvemukati zvinopfuura 15% haina kugadziriswa. Izvi zvinodaro nekuti kuora kwekumanikidza kwe zinc oxide kwakaderera, uye ZnO inogona kuumbwa mumhepo ine gasi inovhengana, uye painopisa kusvika ku450 ° C kana pamusoro, zinc inotanga kuwedzera uye kushayisa simba yendarira. Kuti ukunde kusagadzikana uku, inogona kuvharwa pasi pemamiriro ekumanikidza. Iyo yekudzivirira yekumhepo inoshandiswa yendarira haina kunyatsopisa gasi, ammonia, mvura mhute, nezvimwe zvakadaro. Iyo yekudzivirira mhepo inofanirwa kunge isina sarufa. Iyo yekushandira inoda kunyatso nyatso kucheneswa pamberi pekupisa kupisa, uye hapafanire kuve nemafuta kana imwe tsvina pamusoro.
Vakasiyana 2B uye BA
BA (Bright Annealing) ndiro, musiyano kubva pa 2B ndiro ndeyekuti kubatisa kwakasiyana, 2B inotora nzira yekubatanidza uye yekunhonga, uye BA inosungirirwa pasi penzvimbo isina hydrogen-yakachengetedzwa isina oxygen. Maitiro ekuumburudza uye nzira yekupedzisa kwenzvimbo mbiri idzi dzakasiyana zvakare.
Bhodhi reBA harishandiswe kudhirowa waya. Kana ichifanira kudhonzwa, inopfuura simba nekuparadza.
Iyo 2B bhodhi iri chaizvo matt pamusoro, uye chinhu hachiwoneke. Iyo BA bhodhi ingangoita segirazi-senge uye inogona kujekesa zvakajeka chinhu (zvishoma namatidza).
Ose maviri 2B uye BA anogona kukwenenzverwa mu8K girazi mapaneru, asi 2B inoda mamwe makorari matanho, uye BA inogona kuwana 8K mhedzisiro nekungokanda kwakanaka. Zvichienderana nechigadzirwa chekupedzisira, pane misiyano yekuti BA inokwenenzverwa kana kuti kwete. Zvimwe zvigadzirwa zveBA hazvidi kupora uye zvinoshandiswa zvakananga.
Pashure: 430 kutonhora akakungurusa Stainless simbi machira
Zvadaro: NO.4 machira esimbi
Mirror Yakakwenenzverwa Simbi Sheet
Yakakweshwa Stainless Sheet
Yakakweshwa Stainless Simbi Sheet
Yakakweshwa Isina Simbi Sheet Simbi
Yakakweshwa Isina Simbi Sheet Mutengo
Yakakweshwa Stainless Simbi Mapepa